बहस : कोभिडपछि अब कस्ता फिल्म बनाउने ? - फिचर - कान्तिपुर समाचार
बहस : कोभिडपछि अब कस्ता फिल्म बनाउने ?
समाज निकै अमानवीय रहेछ, फिल्म त्यस्ता नहुन् : सुब्बा
हामीले धेरै 'इस्केपिस्ट' फिल्म बनाइसक्यौं, अब समाजको यथार्थ नियालौं : पण्डित
आश्विन २५, २०७७ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — कोरोना महामारीबीच फिल्म निर्माणका सबै काम ठप्प भए । लामो समय फिल्मको छायाङ्कन रोकियो भने फिल्म हलमा प्रदर्शन पनि रोकियो । यसबीच फिल्म निर्माण घोषणा भने रोकिएन । महामारीबीच नै दर्जन बढी फिल्म बन्ने घोषणा भयो । अवस्था सामान्य (वा छायाङ्कन अनुमति प्राप्त) भएपछि छायाङ्कनमा जाने तयारी रहेको यी फिल्मको निर्माण टिमले बताएको छ ।
यससँगै प्रश्न उठेको छ- अब बन्ने फिल्म कस्ता हुनुपर्ला ? कस्ता विषय र शैलीलाई यिनले पछ्याउने ? अहिले बन्ने गरेका फिल्महरुकै शैली र प्रस्तुतिले हुन्छ कि केही नयाँ चिजको खोजी आवश्यकता छ ?
लकडाउनको समयमा डिजिटल प्लेटफर्ममा धेरै दर्शकले संसारका अनेक देशका भिन्न भिन्न शैलीका फिल्म हेरे । एकथरी समीक्षकहरु यस अवधिमा नेपाली दर्शकले नेटफ्लिक्सलगायतका डिजिटल माध्यमबाट विश्व सिनेमा राम्रैसँग हेरेको अनुमान गर्छन् । यी दर्शकलाई अब पनि पूरानै शैलीका फिल्मले बाँध्न सक्ला त ? वा यी प्लेटफर्ममा पनि दर्शकले बलिउडी शैलीका फिल्म नै हेरे ? यदि त्यसो हो भने के पुरानै सिप र शैली पर्याप्त हुन्छ ? वा फिल्ममेकरले आफ्नो शैलीसँगै दर्शकको रुचि र स्वाद बदल्न पनि मेहनत गर्नु आवश्यक छ ?
'महामारीमा नेपाली दर्शकले फरकखाले फिल्म हेरे भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन,' निर्देशक नवीन सुब्बा भन्छन्, 'पहिला जे हेरिरहेका थिए त्यही हेरिरहेको जस्तो लाग्छ । विश्वभरका फिल्म हेरिरहेको भन्छन् तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । हेरेको भनेको त्यही हिन्दी फिल्म नै हो ।' 'नुमाफुङ' र 'दलन'का निर्देशक सुब्बाले भने, 'बलिउड फिल्म हेर्ने बानी नै बसेको छ नेपालीमा । त्यसैले नेपाली दर्शकको फिल्मप्रतिको रुचि परिवर्तन भयो भन्ने मलाई विश्वास छैन।'
अर्का निर्देशक मनोज पण्डितको मत पनि उस्तै छ । 'दर्शकले नेटफ्लिक्स जहाँ हेरे नि मेलोड्रामा र त्यही 'स्केप्टिस्ट' (पलायनवादी) फिल्महरु नै हेर्छन् । नेटफ्लिक्सको चर्चाले केही फिल्म हेरेका होलान्,' उनले भने । लकडाउनमा नेपाली दर्शकको 'फिल्म लिट्रेसी' ह्वात्तै बढेको कुरा नवीन र मनोज दुवैजना पत्याउँदैनन् । 'फिल्म हेर्दैमा फिल्म लिट्रेसी बढ्ला भन्ने पूर्वानुमान गर्न मिल्दैन । सिनेमा लिट्रेसी मानिसहरुको सामूहिक चेतनाको निर्माणले निर्धाण गर्छ । मानिसहरुको सामाजिक सेचता विकास नभएसम्म सिनेमा लिट्रेसी बढ्दैन । फिल्म हेरेर मात्रै फिल्म लिट्रेसी बढ्दैन,' दासढुंगा र बधशालाका निर्देशक पण्डितले भने ।
त्यसो भए के नेपाली फिल्ममेकरले फरक शैलीमा फिल्म बनाउनु आवश्यक छैन त ?
'महामारीपछि फरक शैलीमा फिल्म बन्नै पर्छ । अब त पुरानो शैलीले झन् काम गर्दैन,' दुवै निर्देशकको एउटै स्वर सुनिन्छ ।
संसारका ठूला-ठूला घटनाहरुले फिल्म बनाउने शैलीमा परिवर्तन ल्याएको बताउँछन् मनोज । कोभिडपछि 'प्यारामिटर' र पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर (पिटिएसडी)को सिद्धान्तमा फिल्म बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् उनी । 'संसारले दुई वटा कुरामा फिल्म बनाउँछ । प्यारामिटर र अर्को पिटिएसडी सिद्धान्तमाथि,' उनले भने, 'कोभिड कालमा मानिसले बाँच्नलाई कसरी संघर्ष गरे, मानिसको जीवनमा कसरी प्रभाव पार्‍यो भन्नेमा प्यारामिटर फिल्म बन्नुपर्छ । कुनै घटना घटिसकेपछि त्यसको मानिसमा पर्ने प्रभाव र जीवनमा पारेको प्रभाव समेट्ने पिटिएसडी फिल्म बनाउनुपर्छ ।'
निर्देशकहरु मनोज पण्डित र नवीन सुब्बा । पण्डितले बनाएका 'दासढुंगा' र 'बधशाला' निकट विगतका राजनीतिक विषयका फिल्म हुन् भने सुब्बाले बनाएका 'नुमाफुङ' र 'दलन' नेपालका दुई फरक भुगोल र संस्कृतिमा मानिसहरुका संस्कृति र संघर्षका कथा हुन् ।
उनका अनुसार नेपालीले यस्ता सिद्धान्तमा कमै फिल्म बनाएका छन् । माओवादी द्वन्द्वको प्यारामिटर र पिटिएसडीमाथि पनि कमै फिल्म बने । नेपाली फिल्ममेकरले यस्ता घट्नाको महत्व नबुझ्ने उनको भनाई छ । 'त्यसकारण हामी फिल्म मेकिङमा अत्यन्त्य पछाडि छौं । हाम्रो दुर्भाग्य के हो भने भइरहेको दुर्घट्नाहरुले हामीलाई फरक पार्दैन,' उनले भने ।
महामारीपछि पनि फिल्ममेकरले प्यारामिटर र पिटिएसडी सिद्धान्तमा फिल्म बनाउलान् भन्ने यकिन नभएको उनी बताउँछन् । अझै फिल्मकर्मीहरु 'स्केपिस्ट' फिल्म बनाउनेतिरै व्यस्त रहेको पण्डितको भनाई छ । 'बीचमा स्केपिस्ट धारमै फिल्महरु बनाउने घोषणा भयो । कोरोनाले समाजमा पारेको ठूलो प्रभाव, असन्तुलनमाथि अध्ययन गरेर फिल्म बनाउनुपर्थ्‍यो । तर केहीबाहेकका सबै त पूरानै स्केपिस्ट फिल्महरु बनाउन लागि परेका छन्,' उनले भने, 'स्केपिस्ट फिल्ममेकरलाई त जुनसुकै घट्ना भए पनि उनीहरुको उद्देश्य भनेको नै यथार्थबाट भाग्नु हो । द्वन्द्व आए नि अर्थतन्त्र डामाडोल भए नि उनीहरुलाई फरक पर्दैन ।'
संवेदनशील फिल्ममेकरले मात्र सिद्धान्तमा रहेर फिल्म बनाउने उनी बताउँछन् ।
कोरोनाले निराश भएका दर्शकका लागि मनोरञ्जनात्मक फिल्म बनाउनुपर्छ भन्ने विचार मौलाएको पनि देखिन्छ । मनोज भने यसलाई मुर्खता भन्छन् । भने, 'मानिसलाई हँसाउने, खुशी पार्ने किसिमको फिल्म बनाउनुपर्छ भन्ने एकथरिका फिल्ममेकरले भनिरहेका छन् । त्यो अत्यन्त ठूलो मुर्खता हो । अबको समयमा त्यस्तो फिल्म बनाउने होइन । समाज नबुझेकाहरुले त्यस्तो फिल्म बनाउँछन् ।'
महामारीबीच मानिसहरुमा निराशा झनै बढेको छ । कोभिडपछि निराशामै अल्झाइदिने फिल्म बन्ने डर रहेको निर्देशक पण्डित बताउँछन्। 'हामीलाई झनै अझै सिनेमाको भडखालोमा लैजाला कि भन्ने पो डर छ । मानिसहरु निराश भइरहेका छन् । यो निराशालाई फिल्मकर्मीले झनै स्केपिस्ट फिल्म पो धेरै बनाउला कि भन्ने डर छ,' उनले सुनाए ।
माओवादी आन्दोलनपछि २/४ वटा फिल्म प्यारामिटर पिटिएसडीमा आधारित रहेर बनेको उनी बताउँछन् । 'सेतो सूर्य', 'बधशाला', 'कालोपोथी', 'गुडबाई काठमान्डु' द्वन्द्वको परिधिबारे बनेका फिल्म हुन् । त्यसमा प्यारामिटर मात्र होइन पिटिएसडी पनि छ । जनआन्दोलनले मानिसहरुमा, सामाजिक रुपमा निर्माण गरेको तनाव समेटिएको छ,' उनले भने ।
निर्देशक सुब्बा कोभिडपछि 'मान्छेलाई मान्छे' बनाउने फिल्म बनाउनुपर्ने बताउँछन् । 'मान्छेलाई मान्छे बनाउने फिल्म बनाउनुपर्‍यो । यो बीचमा नेपाली समाज कस्तो छ भनेर कोभिड-१९ ले देखाइदियो । हाम्रो समाज यति ध्वस्त भइसकेको छ । यति कुहिएको छ । मानवीय संवेदनशीलता भन्ने चिज नै हाम्रो समाजमा कहाँ बाँकी छ ?' उनले समाजको यथार्थ सुनाए, 'अस्पताल जाँदा भर्ना लिँदैन । ज्यान बचाउन बसेको संस्थाहरुले त्यस्तो व्यवहार गर्छ भने संवेदनशीलता कहाँ खोज्ने । खाना नपाएर भौतारिएका खबर पढियो । खोइ समाजको संवदेनशीलता ?'
'डेथ अफ सेल्सम्यान'मा झै मानवीय संवदेनशीलता समेटिने फिल्म बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
सेयर बजारको गिरावटबाट अमेरिकामा ग्रेट डिप्रेसन सुरु (महामन्दी) भयो । सन् १९२९ देखि १९३९ सम्म रहेको आर्थिक महामन्दीको अवधिमा अमेरिकामा २५ प्रतिशतले बेरोजगारी वृद्धि भयो । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ३० प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । ठूलो आर्थिक नोक्सानीबीच मानिसलाई बाँच्न धौधौ भयो । चरम गरिबी । मानिसहरुमा निराशा छायो ।
त्यसपछि लेखियो, 'डेथ अफ सेल्सम्यान' । नाटककार आर्थर मिलरले सन् १९४९ मा लेखेको यो नाटकमा विल्ली लोमनको कथा छ । ६३ वर्षको उमेरमा सेल्सम्यानको रुपमा काम गर्ने विल्लीको जीवनमा महामन्दीले पारेको प्रभाव देखाइएको छ । विल्लीको जीवनमार्फत सन् १९४० को दशकतिर अमेरिकन समाजले देखेको 'द अमेरिकन ड्रिम' पनि समेटिएको छ । नाटकले पुत्लिजर पुरस्कार समेत पाएको थियो । यो नाटकले त्यतिबेला अमेरिकी नागरिकहरुलाई आफ्नो समाज र समयबारे विवेचना गर्न घच्घच्याएको थियो ।
सुब्बा भन्छन्, 'नेपाली समाज देखाउने, मानवीय संवदेना जगाइदिने, हाम्रो समाजलाई रिथिंक गर्न लगाउने फिल्म बनाउनुपर्‍यो ।'
नेपाली फिल्ममेकरले त्यस प्रकारको फिल्म बनाउन सक्छन् भन्नेमा भने उनलाई त्यति आश छैन। 'कोभिडपछिको फिल्म हेरिसकेपछि एकपल्ट मानिसले आफ्नो अनुहार हेरुन् । पून: विचार गरुन् । यत्ति हो फिल्म चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजजस्तो अमानवीय नभइदिए हुन्छ,' उनले कामना गरे ।
कोभिडपछिको समयमा मानिस अझै स्वार्थ केन्द्रित हुन थाल्ने उनी बताउँछन् । '२०७२ को भूकम्पपछि नेपालीहरु एकआपसलाई सहयोग गर्नेछन् भन्ने हुन्थ्यो । मरिमेटेर मानिसलाई उद्धार गरेको देख्दा त्यस्तै लाग्यो सबैलाई । तर त्यस्तो भएन । कोभिडबाट बाहिर निक्लने बित्तिकै हामी पनि अमानवीयतिर, स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्नतिर लाग्छौं भन्ने मलाई डर छ।'
महामारीपछि मात्र होइन कलाले मानवीय पक्षमा सँधै वकालत गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । एक हिसाबले महामारीबीच देखिएको ‍समाज कला, साहित्यको असफलता रहेको उनको भनाई छ । 'यो त नाटक गर्ने, पत्राकारिता गर्ने, फिल्म बनाइरहेका, कविता लेखिरहेकाहरुको ठूलो असफलता हो,' उनले भने, 'हामीले कस्तो समाज निर्माण गरेछौं त । यदि हाम्रो साहित्यले यो मानवीयता जगाउन सकेको भए त समाजको यस्तो नाङ्गो रुप देखिँदैन थियो होला । त्यही भएर हामी कहीँ न कहीँ चुक्यौं । यो चाहिँ आत्मासमीक्षा गर्ने समय पनि हो ।'
उनी थप्छन्, 'मानवीय संवदेना झक्झकाउने फिल्म नै कोभिडपछि बन्नुपर्छ । तर भोली कसो गर्दा फिल्म चल्छ, कसो गर्दा मैले बढी हल पाउँछु, बढी प्रचार पाउँछु भन्नेतिर नै जाने हो हाम्रा फिल्मकर्मी । नेपाली फिल्म विकास गर्ने हो भने त फरक फिल्म बनाउनुपर्‍यो ।'
(समाजका 'सफ्टवेयर' भनिने सिनेमा, साहित्य, खेलकुद, कला कस्तो हुनुपर्ला ? के कस्ता नीति र शैली अंगिकार गर्नु आवश्यक छ भन्ने विषयको यो बहस श्रृंखला केही भागमा चल्नेछ ।)
प्रकाशित : आश्विन २५, २०७७ १८:५५
चीनमा ५ वर्षमा ५ करोड मानिस गरिबी मुक्त
आश्विन २५, २०७७ लक्ष्मी लम्साल
बेइजिङ — पाँच वर्षभित्रमा ५ करोडभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रका जनता गरिबीबाट पूर्णतः मुक्त भएको चीनले दाबी गरेको छ ।
चीनको तेह्रौं पञ्चवर्षीय योजना (सन् २०१६-२०२०) भित्रमा यति ठूलो उपलब्धी हात लागेको आइतबार चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
सन् २०१६ मा चीनको गरिबी दर ४.५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा ०.६ मा झरेको थियो । चीनले सन् २०२० भित्र समग्र चीनभरिको गरिबी उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको छ । यदि यो योजना सफल भएमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०३० दिगो विकासको एजेण्डा पनि १० वर्ष अगावै चीनले हासिल गरेको हुनेछ ।
चीनको राष्ट्रिय गरिबी संख्या ब्यूरोको तथ्यांक अनुसार यो पञ्चवर्षीय अवधिमा चिनियाँ गरिबको आम्दानीमा व्यापक वृद्धि भएको छ । सन् २०१६ मा प्रतिव्यक्ति आय ४ हजार १ सय ४२ युआन (चिनियाँ मुद्रा) रहेकोमा सन् २०१९ मा ९ हजार ५७ युआन पुगेको छ । आयको औसत वार्षिक वृद्धिलाई ३० प्रतिशतमा पुर्याएको चीनले गरिब लक्षित आयमूलक संरचनालाई सरलीकृत गरेको र जनता स्वयं गरिबीबाट मुक्त हुने उपायहरू अवलम्बन गरेको छ ।
चीनको गरिबी निवारणको रणनीतिलाई विश्वका विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले उच्च प्रशंसा गर्न थालेका छन् । यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण चीनले वार्षिक वृद्धिदर निश्चित गरेको छैन भने आर्थिक गतिविधि तुलनात्मक सुस्त भएको छ । यद्यपि महामारी नियन्त्रणमा सफल हुँदै गएको चीनले आर्थिक उत्पादनलाई पुनः तीव्रता दिन थालेको छ ।
प्रकाशित : आश्विन २५, २०७७ १८:४८
टिप्पणी : सरकार सीमा व्यवस्थापनमा चुक्दा अवस्था फेरि जटिलतातिर
सहिद परिवारको गुनासै गुनासो
‘छोराको बलिदानी नगुमोस्’
आँगनका भट्टीमा जो भुट्छन् भुजा